Gịnị bara uru buckwheat mmanụ aṅụ: ọgwụ ọgwụ na contraindications - Ịkpa aṅụ - 2020
Ọ bụghị ihe nzuzo na, dabere na osisi nke aṅụ na-achịkọta nectar, uto na uru nke mmanụ aṅụ dị iche. Taa, anyị ga-ekwu maka ihe kachasị ọnụ ahịa - buckwheat mmanụ aṅụ. Iji nweta mmanụ aṅụ buckwheat, aṅụ ga-anakọta nectar nanị site na okooko buckwheat, nke, dịka ị chepụtara, na-enye anyị buckwheat. Ị ga-amụta uru nke mmanụ aṅụ na-ahụ maka ahụ na otu esi eji ya mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị na nkà mmụta ọdịnala ma ọ bụ nchịkwa.
Agwa Buckwheat: calorie, vitamin na mineral
Kedu ka mmanụ aṅụ buckwheat si aba uru maka ahu?
Esi lelee mmanụ aṅụ buckwheat maka ọdịdị na àgwà
Iwu maka nchekwa nke mmanụ aṅụ buckwheat
Ọrụ nke buckwheat mmanụ aṅụ na cosmetologists
Ngwurugwu na ihe nwere ike imebi mmanụ aṅụ buckwheat
Ihe dị iche iche nke mmanụ aṅụ buckwheat si iche iche
Mmanụ aṅụ na-abụkarị ihe mara mma, ebe ọ bụ na, dabere na mpaghara ebe anakọtara nectar (steppe, forest-steppe ma ọ bụ ọhịa), agba nke mmanụ aṅụ dị iche. Ọ nwere ike ịbụ ọgaranya edo edo ma ọ bụ agba aja aja, tinyere ihe niile na agba ndị a.
Ụcha nke mmanụ aṅụ buckwheat bụ ọchịchịrị. Ọ kachasị mfe ịchọta ya na ihe dị elu, dị ka ọ na-eme na agba nke "Coca-Cola", ma ọ bụ, ma e jiri ya tụnyere ihe ọṅụṅụ ndị ọzọ, "Baikal". Ihe ịrịba ama a ga-amata mmanụ aṅụ na ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ ahịa, ma ọ bụrụ na ị nwere ohere ịnwale ya - jiri ohere a.
Nke bụ eziokwu bụ na agba ọchịchịrị bụkwa mmanụ aṅụ, bụ nke a na-achịkọta aṅụ n'osisi. Ya mere, ọ nwere mgbagwoju anya na buckwheat ma nweta ngwaahịa zuru oke.
Agụmakwụkwọ Buckwheat nwere uto dị ilu na tart. Mgbe ojiji otu mmanụ aṅụ na akpịrị malite ịkwanye ntakịrị, nke jikọtara ya na ngwepụta nke ngwaahịa ahụ.
Ọ dị mkpa! Agụmakwụkwọ Buckwheat na-amalite okpukpu ọkụ karịa ụdị mmanụ aṅụ ndị ọzọ.
Ọ na-esiri ike ikwurịta kpọmkwem ihe mejupụtara mmanụ aṅụ, ebe ọ bụ na ọ gaghị ekwe omume iji aṅụ "ihe omume" iji nakọta nectar nanị si buckwheat. Ha nwere ike weta nectar, dịka ọmụmaatụ, site na mkpuru ahịhịa ubi, na ngwugwu agbanweela. Ọ dị mkpa iburu n'uche na mmanụ aṅụ buckwheat nwere ọtụtụ ígwè, enzymes, sugars, vitamin na mineral.
Ngwurugwu ihe onwunwe:
Enwere ihe karịrị 40 microelements na mmanụ aṅụ, nke nwere mmetụta dị mma n'ahụ ahụ mmadụ.
Nri buckwheat nwere ọgaranya dị iche iche: glucose (42%), fructose (41%), sucrose (2%).
Ọnụnọ ndị sugars na-achọpụta ọdịnaya calorie nke mmanụ aṅụ buckwheat, nke ruru 309 kcal. Iji tụnyere: ọdịnaya caloric nke 100 g mmanụ aṅụ bụ ihe caloric nke 150 g nke eghe ọkụkọ.
Otú ọ dị, a ghaghị ịghọta na mmanụ aṅụ adịghị eri n'ọtụtụ buru ibu ọbụna maka ọgwụgwọ, nke pụtara na ngwaahịa a bara uru agaghị emetụta ọdịdị ahụ.
N'izo aka na mpi nke buckwheat, enwere ike kwubiri na ihe ndi a na-eri anu nwere otutu vitamin na ihe di iche iche, nke putara na o bara uru nye ahu anyi.
A pụrụ ịkpọ mmanụ aṅụ "nchekwa nchekwa ụwa," dịka ngwaahịa a ọ bụghị nanị na ọ bụghị ihe nkwata, kama ọ na-egbukwa nje bacteria niile. Enwere ike iji ihe a eme ihe ọ bụghị naanị na nri ma ọ bụ ichebe, kama maka ọgwụgwọ ọrịa dịgasị iche.
Mmanụ aṅụ nwere ike ịlụso nje virus ọgụ, ya mere, a na-eji ya agwọ ọrịa na ọrịa na-efe efe.
A na-eji mmanụ aṅụ Buckwheat eme ihe n'ụzọ gara nke ọma na cosmetology, ya mere, ọ gaghị enwe ike ịba uru ya maka ụmụ nwanyị. Site n'enyemaka nke anu anụ na-eme ka akpụkpọ ahụ dị ọcha, nye ya ngbanwe ma belata mbufụt. Ozokwa, o kwesiri iburu n'uche na mmanu mmanu bara uru nye ndi di ime, ebe ihe omumu ya yiri nke plasma ọbara, ajuju adighi eme.
Ngwaahịa a na-enye aka iwusi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ike, iji sụgharịa ahụ ya na vitamin niile dị mkpa na ihe ndị na-achọpụta. Ihe na-adọrọ mmasị nke mmanụ aṅụ bụ na mgbe ị na-ewere ngwaahịa tupu amua ya, ọ na-eme ka ọbara gbasaa n'ime akpanwa ma na-enyere nne aka ịnarị ahụmahụ na-egbu mgbu.
Ọ dị mkpa! Tupu ịṅụ mmanụ aṅụ, ị ga-ahụ dọkịta. Ọ bụrụ na ị jiri akọ na-eji ngwaahịa bee, ị nwere ike "ịkwụ ụgwọ" nwa gị e bu n'afọ na allergies.
N'oge oyi na oge opupu ihe ubi, mmanụ aṅụ na-enyere aka ịlụ ọgụ megide avitaminosis na enweghi ihe ndị ịnweta mineral. Ngwaahịa a zuru ezu iji mebie kwa ụbọchị na obere obere iji wepụ ọrụ na enweghị mmasị ma nye ahụ ahụ ike maka ọrụ zuru ezu.
Mmanụ aṅụ na-enyere ndị na-arịa ọrịa anaemia, ọbara mgbali elu, ọnyá afọ afọ, nsogbu na arịa ọbara na acidity.
A maara anụ ngwaahịa maka eziokwu ahụ nke na-ewepụ ndị radionuclides si n'ahụ ahụ, ya bụ, bụ ngwaahịa dị oké mkpa maka ndị na-arụ ọrụ na osisi ike nuklia ma ọ bụ ihe dị redio.
Ya mere, ọgwụ ọgwụ nke buckwheat mmanụ aṅụ na-esiri ike ikpochapụ. A pụrụ iji ngwaahịa a dị ka mgbakwunye ihe oriri iji mejupụta ngwongwo nke vitamin, dị mkpa maka ịgwọ ọrịa dị iche iche.
Ngwongwo Buckwheat bu ugwo ahia nke anu ulo, ya mere anyi ga ekwu banyere otu esi ele ya maka odidi na mma.
Nke mbụ, karịa mmanụ aṅụ dị mma dị iche na nke adịgboroja, - agbanwe agbanwe.
Mmanụ aṅụ ga-abụ ezigbo viscous, ma ọ bụ sugar ma ghọọ nnukwu uka.
Ọzọ, anya na agba. Nke bụ eziokwu bụ na ọ bụghị mmanụ nkịtị nwere ihe ọ bụla na-apụghị ịghọta aghọta nke agba dị iche, ma ọ bụ onyinyo dị oke, nke na-agba ọchịchịrị ma ọ bụ na-acha ọkụ na akụkụ ụfọdụ nke akpa ahụ.
Ị ma? Mmanụ aṅụ bụ otu n'ime ngwaahịa ndị kachasị njọ, dị ka ọnụahịa ndị na-edozi shuga bụ 5-10 ugboro dị ọnụ ala karịa ngwaahịa mbụ. A na-eji mmanụ sugar starch sugar eme ihe na Switzerland, ebe o jiri "mmanụ aṅụ Switzerland" mee ihe, nke mejupụtara 30% bee mmanụ 70% starch sirop.
Mgbe ịzụrụ bụ imepe akpa ahụ na mmanụ aṅụ ma nụ ya. Isi ísì ụtọ buckwheat na-enye ihe ọ bụla adịgboroja, ebe ọ bụ na ngwaahịa sitere na ya na-esi ísì dịka okooko osisi, na ísì n'onwe ya dị ike ma "agaghị apụ" oge. Ọ bụrụ na mmanụ aṅụ adịghị anụ ihe ọ bụla, ị gaghị ewere ya.
Ugbu a, ka anyị kwuo banyere ụzọ ndị dị irè iji chọpụta ihe adịgboroja ma ọ bụ ngwaahịa a kwụsịrị:
Tinye tablespoon mmanụ aṅụ na akwụkwọ. Ọ bụrụ na mgbe obere oge, ntụpọ mmiri pụtara na mpempe akwụkwọ - a na-atụgharị mmanụ aṅụ na mmiri ma ọ bụ sirop.
Site n'enyemaka nke pensụl pensụl, ị nwekwara ike ịmụta banyere ihe "zoro ezo". Ọ bụrụ na mmanụ aṅụ ahụ abụghị ihe okike, ọ pụtara na pensụl ga-eme ozugbo ozugbo ọ na-abịa na kọntaktị na ngwaahịa (agba ga-agbanwe).
Ezigbo mmanụ aṅụ na-agbaze kpamkpam na mmanya na-aba n'anya, na-atụgharị ma ọ bụ na-ekweghị n'okike - na-enye ụta mmiri.
Ọtụtụ ndị na-enwe nchegbu banyere ajụjụ a na-echekwa mmanụ aṅụ buckwheat. Dịka e kwuru n'elu, mmanụ aṅụ bụ ihe nchebe anụ ahụ, nke pụtara na ọ dịghị njọ. Ọ dịghị onye chere na mmanụ aṅụ, nke bụ eziokwu, bụ ngwaahịa a na-ejedebe na ọka na-amị mkpụrụ. Usoro nhụjuanya dị iche iche, nke ahụ wee ghọọ mmanụ aṅụ (ya bụ, ọ na-agbaze).
Ntakịrị obere ume na-enyere aka ịghọta na mmanụ aṅụ bụ ngwaahịa na-adịgide adịgide. Otú ọ dị, ọnọdụ nchekwa na-emetụta nnọọ uru ọ bara.
Oké okpomọkụ sitere na -5˚Y ruo + 20˚Y bụ ndị kwesịrị ekwesị maka ịchekwa ngwaahịa ahụ.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na mmanụ aṅụ na-adị ọkụ na okpomọkụ 40 ° C na n'elu, ọ ga-efunahụ ụfọdụ vitamin bara uru na enzymes.
Ọzọ bụ ilekọta nkwakọ ngwaahịa ahụ. Mmanụ aṅụ na-ekpuchi mmiri nke ọma, n'ihi ya, i nweghị ike ịhapụ ya. Obere iko ọ bụla nke dabara na mkpuchi kwesịrị ekwesị. Na efere a, mmanụ aṅụ agaghị enwe ike imeri mmiri mmiri si n'elu, nke pụtara na ọ gaghị aghọ mmiri.
Lezienụ anya ka ụzarị ọkụ nke anyanwụ ghara ịda na mmanụ aṅụ, ma ọ bụrụ na ngwaahịa beekeeping ga-atụfu ụfọdụ vitamin.
Ọzọkwa, vitamin furu efu, mineral ma ọ bụ enzymes adịghị emetụta uto nke ngwaahịa ahụ.
Ya mere, ọ bụrụ na mmanụ aṅụ na-abaghị uru, mgbe ahụ, ị ​​gaghị ama ya.
Ọ dị mkpa! Ọ bụghị naanị mmanụ aṅụ na-eme ka ọ dị mma! Ọ bụrụ na edere ndụ obere ndụ na akpa na mmanụ aṅụ a zụtara, ọ bara uru iche echiche banyere ọdịdị nke ya.
A na-eji mmanụ aṅụ Buckwheat eme ihe ọ bụghị nanị dịka ihe nkpuchi ihu, kama iji mee ka ntutu dị ike.
Ka anyi malite site na nkpuchi. Ebe ọ bụ na mmanụ aṅụ na-edozi akpụkpọ ahụ na vitamin na anụ ahụ, ọ nwere ike iji ya dị ka isi ihe nkpuchi ahụ.
Ị ma? Ndị na-emepụta mmanụ aṅụ kasị elu n'ụwa bụ mba anọ: China, Turkey, Argentina na Ukraine.
Nkpu maka akpụkpọ anụ. Were otu egg nkochi ime akwa na-ete ya na 1 tsp. mmanụ aṅụ na apụl apụl. A na-etinye ngwakọta nke a na ihu na ihu ma jide 15 nkeji. Mgbe nke ahụ gasị, saa ahụ mkpuchi na mmiri ọkụ.
Nkpuchi maka mmanu mmanu. Mix 1 tbsp. l starch, 1 tsp. mmanụ aṅụ na nnu. Mgbe agwakọta nke ọma, tinye 1 tbsp. l mmiri ara ehi mmiri ara ehi ma tinye ya na ihu. Jide mkpuchi maka ihe dị ka nkeji 15. Mgbe oge gasịrị, gbanyụọ mmiri dị jụụ.
Nkpuchi maka akpọrọ akpụkpọ. Mix 2 tbsp. l anụ ọka na 2 tbsp. l mmanụ oliv na otu ego mmanụflower. Na-esote, a na-ekpochasị ngwakọta ahụ na 35-38 ˚ C ma tinye ya na gauze ma ọ bụ akwa akwa. Ọzọ, tinye ha na ihu maka nkeji 15-20. Wepu ihe nkpuchi site na ihu ya na akwa akwa na akwa.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na ọ bụrụ na ị na-etinye ihe nkpuchi, ịcha ọbara ọbara ma ọ bụ na-ere ọkụ, ọ dị mkpa ka ịsacha mmiri ahụ ọkụ.
Iji mee ka ntutu dị ike na mmanụ aṅụ, tinye nnọọ otu tablespoon nke ngwaahịa gị na nchapu. Otú ọ dị, ọ bara uru icheta na ọ bụrụ na mmanụ aṅụ ahụ bụ candied, ọ ga-edozi na ala na ọ gaghị enwe mmetụta.
Na mgbakwunye na-agbakwunye mmanụ aṅụ na ncha, ị ga-ete ya kwa ụbọchị na mgbọrọgwụ ntutu. Ọ kacha mma ime nke a maka ọkara otu awa tupu ị gaa ịsa ahụ.
Ka mmanụ aṅụ wee ghọọ ezigbo ọgwụ, a ghaghị iji ya ma ọ bụ na mpaghara ndị ọzọ.
Ọ dị mkpa! Ọ bụrụ na mmanụ aṅụ buckwheat na-afụ ụfụ gị, ọ bụrụ na ị ga - aṅụ ọgwụ na - adabere na ya.
Na anaemia. Na 1 l mmanụ aṅụ na ịchọrọ ịgbakwunye 8 g nke ginseng mgbọrọgwụ (na akwụkwọ powdered) ma na-esi ọnwụ n'izu, na-agwakọta ọtụtụ ugboro n'ụbọchị. Were 1/5 tsp 2 ugboro n'ụbọchị.
Mgbe ọbara mgbali elu, ụjọ ma ọ bụ ehighi ura ịkwesiri itinye 1 tbsp na 1 iko mmiri ịnweta. l mmanụ aṅụ na mmiri squeezed ihe ọṅụṅụ nke zst lemon. Na-aṅụ ihe ọṅụṅụ a na afọ efu. Usoro nkwekọrịta - ọ bụghị ihe karịrị ụbọchị 14.
Ọ dị mkpa! Ntụziaka a adịghị adabara ndị na-ata ahụhụ site na ụba acidity nke afo.
Imecha ahụ toxins. Ị ga - achọ 400 g nke prunes akpọrọ, 200 g nke apricots apịtị, 200 g nke fig na 200 g nke mmanụ aṅụ buckwheat. Mkpụrụ osisi a mịrị amị na-achọ ka ị na-egwupụta ihe dị iche iche ma jikọta ya na mmanụ aṅụ. Were ọgwụ dị ụtọ dị gị mkpa 1 tbsp. l tupu ihi ụra.
Avitaminosis mgbochi. Iji kwadebe ngwakọta, were 3.5 kg nke ukpa bee, 1 n'arọ nke hazelnut bee na 1 l nke buckwheat mmanụ aṅụ. Ghichaa mkpụrụ ahụ ma kpoo ya na mmanụ aṅụ na-ekpo ọkụ (nke mere na ihe ndị dị mma ka mma). Were obere doses n'oge oyi na ụkọ mmiri nke vitamin.
Na-emeso ụkwara. Usoro ochie na-enyere aka imeri ọbụna ụkwara siri ike. 350 ml nke ọkụ sie mmiri ara ehi buru 1 tbsp. l mmanụ aṅụ buckwheat na teaspoon atọ nke soda. Mee ka mma tupu ị lakpuo ụra iji kpoo ikuku.
Ọgwụgwọ nke usoro mkpụrụ ndụ ihe nketa. Anyị na-eme nsị nke mkpụrụ osisi ash (3 tsp. Mgbe rowan na-adịru awa ole na ole, enwere ike iwebata ya na mmanụ aṅụ buckwheat.
E nwere ọtụtụ ntụziaka ndị na-enyere aka ịkwụsị ọrịa kachasị "ewu ewu". Cheta na ọgwụ, na-adabere na ihe ndị e kere eke, nwere ike ịkpata nsogbu ma ọ bụrụ na emegbu ya.
Ngwa nke ịkpa aṅụ nwere ikikere nke ya, ebe o nwere ọtụtụ ọnụọgụ dị iche iche nke ihe ndị na-emepụta ihe na enzymes. Ya mere, ọgwụgwọ ahụ na mmanụ aṅụ adịghị "akwụ ụgwọ" gị na nsogbu ahụike ndị ọzọ, ọ dị mkpa ka ị mara nke ọma na ọ bụ mmanụ aṅụ ga-afụ ụfụ kama inye aka.
Kedu ihe ndị ị na-ekwu maka ọgwụ oyinbo buckwheat?
Mmanụ aṅụ agaghị ewere ndị ọrịa mamịrị. Ọ bụ ezie na sugars bụ akụkụ nke ngwaahịa a, ọ ka dị ize ndụ, ebe o nwere ike imetụta ọrịa ahụ.
Mmanụ aṅụ dị ize ndụ maka ụmụntakịrị dịka ọ bụ maka ndị ọrịa mamịrị, ebe ọ bụ na ahụ siri ike.
Mgbe ọ dị afọ 5-6, ụmụaka nwere ike inye mmanụ aṅụ nanị mgbe ha jụsịrị dọkịta.
Ikwesiri ighota na onu ahia nke uzo nwere ike inwe otutu nsogbu. Ya mere, ọ dị mkpa ịbelata onwe gị n'iwe ngwaahịa a, karịsịa ma ọ bụrụ na ị nwere nsogbu na ibu ibu.
Mgbe anyị kwusịrị banyere uru na ihe ize ndụ nke mmanụ aṅụ buckwheat, anyị nwere ike ikwu n'eziokwu na, n'agbanyeghị ọganihu nke ụlọ ọrụ nri, ọ gaghị ekwe omume iji dochie anya ngwaahịa dị otú ahụ bara uru. Jiri vitamin na mineral a na-echekwa ahụ gị, kpochapụ ya ma lụọ ọrịa.